Ukumaketha Okuseduze: Kuyini lokho? Yiziphi izinhlobo?
Lapho nje ngingena ku-Kroger (esitolo sami) wangakini, ngibheka phansi ifoni yami futhi uhlelo lokusebenza lungazisa lapho ngingathola khona ibhakhodi lami le-Kroger Savings ukuze ngibheke noma ngikwazi ukuvula uhlelo lokusebenza ukusesha ngithole izinto ku indlela. Lapho ngivakashela isitolo saseVerizon, uhlelo lwami lokusebenza lingixwayisa ngesixhumanisi sokungena ngaphambi kokuthi ngiphume emotweni.
Lezi izibonelo ezimbili ezinhle zokuthuthukisa umuzwa womsebenzisi ngokususelwa ku- i-hyperlocal kubangela. Imboni yaziwa njenge Ukumaketha Okuseduze.
Akuyona imboni encane, kulindeleke ukuthi ikhule ibe ngama- $ 52.46 billion USD ngo-2022 ngokusho AmaMarke.
Kuyini ukumaketha okuseduze?
Ukumaketha okusondele kunanoma yiluphi uhlelo olusebenzisa ubuchwepheshe bendawo ukuxhumana ngqo namakhasimende ngamadivayisi wabo aphathekayo. Ukumaketha okusondele kungafaka ukunikezwa kokukhangisa, imilayezo yokumaketha, ukusekelwa kwamakhasimende, nokuhlela, noma amanye amasu wokuzibandakanya phakathi komsebenzisi wefoni ephathekayo nendawo abakuyo.
Ukusetshenziswa kokumaketha okusondelana kufaka phakathi ukusatshalaliswa kwemidiya kumakhonsathi, ulwazi, ukugembula, kanye nezinhlelo zokusebenza zenhlalo, ukungena kwezitolo, amasango okukhokha, kanye nokukhangisa kwasendaweni.
Ukumaketha okuseduze akuyona ubuchwepheshe obuyodwa, kungasetshenziswa ngokusebenzisa izindlela eziningi ezahlukahlukene. Futhi akukhawulelwe ekusetshenzisweni kwe-smartphone. Ama-laptops anamuhla anikwe amandla i-GPS nawo angabhekiswa kubuchwepheshe obusondelene.
I-NFC - Indawo yocingo ingahle inqunywe ngu ukuxhumana kwezinsimu eziseduze (NFC) inikwe amandla ocingweni oluxhuma kwi-chip ye-RFID kumkhiqizo noma kwimidiya. I-NFC ubuchwepheshe obusetshenziselwe i-Apple Pay nobunye ubuchwepheshe bokukhokha kepha akudingeki bukhawulelwe ekukhokheni. Iminyuziyamu nezikhumbuzo, ngokwesibonelo, zingafaka amadivayisi we-NFC ukuhlinzeka ngemininingwane yokuvakasha. Izitolo zingathengisa i-NFC emashalofini ngolwazi lomkhiqizo. Kukhona ithani lamathuba wokumaketha ngobuchwepheshe be-NFC.
I-Geofencing - Njengoba uhamba nefoni yakho, ukuxhumana kwakho kwamaselula kuphethwe phakathi kwemibhoshongo. Izinhlelo zokumaketha umlayezo wombhalo zingasebenzisa indawo yakho ukusunduza imilayezo yombhalo kulawo madivayisi angaphakathi kwesifunda esithile. Lokhu kwaziwa njenge I-SMS yokwenziwa kocingo. Akuyona ubuchwepheshe obuqondile, kepha kungasiza ukuqinisekisa ukuthi umlayezo wakho uthunyelwa kuphela kuzethameli eziqondiwe ozidingayo ngesikhathi osifunayo.
Bluetooth - Izindawo Zokuthengisa zingasebenzisa ama-beacons ezingaxhuma ku-smartphone yakho. Imvamisa kukhona uhlelo lokusebenza lweselula olunika ubuchwepheshe nemvume eceliwe. Ungadudula okuqukethwe ngeBluetooth, ukhonze amawebhusayithi asendaweni avela ku-WiFi, usebenzise ibhakana njengendawo yokungena kwi-Intanethi, wenze njenge-portal Captive, unikeze ngezinsizakalo zokuxhumana, futhi usebenze ngaphandle kokuxhumeka kwe-inthanethi.
RFID - Kunobuchwepheshe obuhlukahlukene obusebenzisa amagagasi omsakazo ukukhomba izinto noma abantu. I-RFID isebenza ngokugcina inombolo ye-serial kudivayisi ekhomba into noma umuntu. Lolu lwazi lushumekwe kwi-microchip enamathiselwe ku-antenna. Lokhu kubizwa ngokuthi ithegi ye-RFID. I-chip idlulisa imininingwane ye-ID kumfundi.
I-ID Yaseduze - Lawa ngamakhadi okusondela noma ama-ID angathintwa. Lawa makhadi asebenzisa i-antenna eshumekiwe ukuxhumana nesamukeli esikude ngaphakathi kwamasentimitha ambalwa. Amakhadi okusondela amadivayisi afundwa kuphela futhi asetshenziswa kakhulu njengamakhadi okuphepha okungena emnyango. Lawa makhadi angaphatha imininingwane elinganiselwe.
Izinkampani ezifisa ukwenza lezi zingxenyekazi zisebenzisa izinhlelo zokusebenza zeselula eziboshwe, ngemvume, endaweni yezindawo zedivayisi yeselula. Lapho uhlelo lokusebenza lweselula lungena endaweni ethile, ubuchwepheshe be-Bluetooth noma be-NFC bungakhomba indawo yabo lapho imilayezo ingaqala khona.
Ukumaketha Okuseduze Akudingi Njalo Izinhlelo Zokusebenza ezibizayo nobuchwepheshe beGeocentric
Uma ungathanda ukusizakala ngokusondelana nokumaketha ngaphandle kwabo bonke ubuchwepheshe… unga!
Amakhodi we-QR - Ungabonisa izimpawu endaweni ethile enekhodi ye-QR kuyo. Lapho isivakashi sisebenzisa ifoni ukuskena ikhodi ye-QR, wazi kahle lapho zitholakala khona, ingaletha umyalezo ofanele wokumaketha, futhi ibone indlela abaziphatha ngayo.
I-Wifi Hotspot - Unganikela nge-wifi hotspot yamahhala. Uma ngabe ungene ekuxhumaneni kwezindiza noma i-Starbucks, uke wabona okuqukethwe kokumaketha okunamandla okucindezelwa ngqo kumsebenzisi ngesiphequluli sewebhu.
Ukutholwa Kwesiphequluli Seselula - Faka i-geolocation kuwebhusayithi yenkampani yakho ukuthola abantu abasebenzisa i-Mobile Browser endaweni yakho. Ngemuva kwalokho ungaqala ugaxekile noma usebenzise okuqukethwe okunamandla ukukhomba lowo muntu - noma ngabe uku-Wifi yakho noma cha. Okuwukuphela kokubi kulokhu ukuthi umsebenzisi uzocelwa imvume kuqala.
Izimalimboleko Zokuzikhethela isungule le infographic njengesibukezo seProximity Marketing yamabhizinisi amancane naphakathi (SMEs):
Tags: beaconbluetoothukumaketha kwe-bluetoothimalimboleko yokukhethageofencingkunabongokuukumaketha kwe-hotspotkwasendawenii-hyperlocalukumaketha kwe-hyperlocalibeaconibhizinisi eliphakathi nendawoukuphequlula mobileeduze nokuxhumana kwensimunfcukusondelana nokumakethaizibalo zokumaketha ukusondelaAmakhodi we-QRamabhizinisi amancane naphakathi nendawoIbhizinisi elincaneSMEkuyini ukumaketha okusondelei-wifi hotspot
Ukumaketha Kwendawo: I-Geo-Fencing nama-Beacon
Isixazululo sokumaketha esiseduze, singanikeza amakhasimende akho lolo lwazi olwenziwe ngezifiso, olwehlukile
Ngiyabonga kakhulu ngeBlog Blog ngokufaka kuhlu izinketho ezahlukahlukene. Bengizibuza ukuthi badlale kanjani ngamunye kule ndawo. Ngabe kwenzeka ukuthi wazi ukuthi ngingalutholaphi uhlu lwabaphathi abaphezulu be-Proximity Marketing technology? Ngifuna ubuchwepheshe be-Bluetooth ngqo.
Mar 25, 2016 ku-3: 45 AM